IFM: hanolotra seho miavaka i D’Gary | NewsMada
IFM: hanolotra seho miavaka i D’Gary
Hetsika iray hampahafantarana ny zavakanto malagasy ankehitriny, amin’ny toerana tokana, ny « Focus art contemporain », hotanterahina ao amin’ny Institut français de Madagascar (IFM), amin’ity volana septambra ity. Ho hita ao avokoa ireo talenta nanamarika ny zavakanto malagasy, tato anatin’ny 20 taona: ny asa soratra, ny dihy, ny mozika, ny hosodoko, ny kanto araka endrika amam-bika, sns.
Eo amin’ny tontolon’ny mozika, hiavaka ny seho iarahana amin’i D’Gary, ny zoma 21 septambra. Ny antony, tsy fahita firy ny fiakarany an-tsehatra irery, indrindra eto an-tanindrazana. Ankoatra izany, manana ny maha izy azy i D’Gary, na amin’ny gadona lalaovina na amin’ny hafatra entiny.
Tany amin’ny faramparan’ny taona 80 no niandohany, eo amin’ny tontolon’ny mozika. Anisan’ireo nampahafantatra ny mozika malagasy, hatrany ivelany any, izy. Mpitendry gitara ikoizana i D’Gary ary ambaran’ireo matihanina toa azy fa manana ny fomba fitendriny manokana izy.
Ahitana taratra hatrany ny zavakanto sy ny kolontsaina avy any atsimon’ny Nosy, toerana niaviany, ny sanganasan’ity mpanakanto ity. Fotoana fanararaotra ny fisehoany an-tsehatra toy izao.